EX - ABSDF: "ဘယ်သူတွေ ပိုရိုင်းသလဲ" ************* မောင်သာချို
Tun Min Latt
(တစ်) . နိုင်ငံကျော် စာရေးဆရာကြီး ဦးအောင်သင်းနှင့် မကြာခဏဆိုသလို ခရီးအတူသွားဖြစ်ပါသည်... နိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ ကျင်းပကြရာ စာပေဟောပြောပွဲများ၌လည်း အတူတကွ ပွဲပေါင်းများစွာ တက်ရောက်ဟောပြောဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။ .
လူသားတို့၏ယဉ်ကျေးခြင်း ရိုင်းစိုင်းခြင်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆရာဦးအောင်သင်း တစ်ခါတစ်ခါ ထည့်သွင်းပြောဆိုလေ့ရှိသည့် ထေ့လုံးငေါ့လုံးကလေးတစ်ခုကို ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ၌ ယခုတိုင်စွဲငြိလျက်ရှိပါသည်.....
. သည်လိုပါ။တစ်နေ့သ၌ လူယဉ်ကျေးဟုဆိုသူတစ်စုတို့ လူရိုင်းတို့ ကျက်စားနေထိုင်ကြရာ ကျွန်းကြီးတစ်ကျွန်းရှိရာဆီသို့ အမှတ်မထင်ရောက်ရှိ၍ သွားခဲ့ကြပါသည်.... . အဆိုပါလူရိုင်းတို့မှာ မည်ကာမတ္တလူရိုင်းများမဟုတ်ကြဘဲ လူသားစားသည့် တကယ့်လူ့အရိုင်းအစိုင်းများ အဆင့်ဖြစ်ပါသည်.... . ဘာဘေးရီးယန်း (Barbarian) မျိုးနွယ်များဟုပဲ ဆိုကြပါစို့.... . သို့ဖြင့် အရိုင်းနှင့် အယဉ်တို့ တွေ့ကြလေရာ အယဉ်များက အရိုင်းများကို အထင်သေးစွာဆက်ဆံပါသည်.... . လူသတ်သလားဟုမေးရာ အရိုင်းတို့က သတ်ကြောင်းဝန်ခံပါသည်.... . သတ်ပြီးတော့ စားသလားဟု ထပ်မေးရာ စားကြောင်း ၀န်ခံပြန်ပါသည်....
ထို့ကြောင့် အယဉ်များက ဒါ့ကြောင့်ရိုင်းတာဟု မှတ်ချက်ပေးပါသည်..... . . ထို့နောက် အရိုင်းတို့က မေးခွန်းမေးသော အလှည့်ဖြစ်ပါသည်..... .
မင်းတို့လူတွေရော တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တိုက်ကြ၊ ခိုက်ကြ၊ သတ်ကြ၊ ဖြတ်ကြသလားဟုမေးရာ အယဉ်တို့က တိုက်ကြောင်း၊ ခိုက်ကြောင်း၊ သတ်ကြောင်း၊ ဖြတ်ကြောင်း ၀န်ခံပါသည်..... . အရိုင်းတို့က သတ်ပြီးလျှင် စားသလားဟုမေးပါသည်။ .. အယဉ်တို့က မစားပါကြောင်း ခါးခါးသီးသီးငြင်းဆန် ပါသည်.... . ဤ၌....လူရိုင်းတို့က ကောက်ချက်တစ်ခု ဆွဲပါလေတော့သည်...... . ငါတို့တွေက စားဖို့အတွက်သတ်တာ... မင်းတို့တွေက မစားဘဲနဲ့ အကြောင်းမဲ့သက်သက်သတ်တာ။ . .
ဒါ့ကြောင့်....မင်းတို့တွေက ပိုပြီးတော့ ရိုင်းတာတဲ့....... . . ဆရာကြီးဦးအောင်သင်း၏ ဟောပြောမှု အတတ်ပညာအောက်မှာ ပရိသတ်၏ သြဘာပေးသံများက ကျွက်ကျွက်ညံလို့.... . ဟုတ်ပါသည်..... . ကျွန်တော်တို့ ရိုင်း၊ မရိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ကြည့်ဖို့ လိုအပ်လာခဲ့ပါပြီ..... .
လူတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် အကြောင်းမဲ့သက်သက် ရန်ပြုသတ်ဖြတ်နေကြသော ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေသည် တကယ့်ကိုယဉ်ကျေးသော ကမ္ဘာသို့ ရောက်ရှိနေခဲ့ကြပြီဆိုသည်မှာ ဟုတ်မှဟုတ်ပါလေစ...... . (နှစ်) .
လူတစ်ယောက်ကို အဆုံးအဖြတ်ပေးသည်မှာ ထိုသူ၏စရိုက်နှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ သုစရိုက်သမားလား၊ ဒုစရိုက်သမားလား၊ ဓမ္မ၀ါဒီလား၊ အဓမ္မ၀ါဒီလား.... . သုစရိုက်သမားဆိုလာ၊ ဒုစရိုက်သမားဆိုသွား.... . ဓမ္မ၀ါဒီဆိုလာ၊ အဓမ္မ၀ါဒီဆိုသွား.... . ဒါပဲဖြစ်ပါသည်.... . ကျွန်တော်တို့ ဟစ်တလာကို မုန်းကြသည်မှာ ဂျာမနီနိုင်ငံသားဖြစ်နေ၍ မုန်းကြသည်မဟုတ်ပါ.... . အိုစမာဘင်လာဒင်ကို ရွံကြသည်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေ၍ ရွံကြခြင်းမဟုတ်ပါ... . မူဆိုလိုနီကို စက်ဆုပ်ကြသည်မှာ လူဖြူဖြစ်နေ၍ စက်ဆုပ်ကြခြင်းမဟုတ်ပါ..... . သူတို့၏ ရက်စက်သော နှလုံးသားနှင့် ကြမ်းကြုတ်သော လုပ်ရပ်များကို အခြေခံကာ မုန်းကြ.....ရွံကြ....စက်ဆုပ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်.... . ဒါဆို... .အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်သည့် အိန္ဒိယသမ္မတဖြစ်ခဲ့သူ အဗ္ဗဒူကလာမ်ကြီးကို ကျွန်တော်တို့ အဘယ့်ကြောင့် လေးစားနေကြပါသလဲ..... . ဟိန္ဒူစစ်စစ်ကြီးဖြစ်သည့် မဟတ္တမဂန္ဒီကြီးကိုရော ကျွန်တော်တို့ အဘယ့်ကြောင့် ချစ်နေကြတာပါလိမ့်။ . ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်သက်ဝင်သူ မာသာထရီဆာကိုရော ကျွန်တော်တို့ အဘယ်ကြောင့် မြတ်နိုးနေကြတာပါလိမ့်..... . အိုင်းစတိုင်းဟာ ဂျာမနီမှာမွေးလို့ မုန်းခဲ့ကြလို့လား... . ရှင်းပါသည်...... . ကျွန်တော်တို့ချစ်တာ.... လေးစားတာ....... မြတ်နိုးတာများသည် ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာတွေ....လူမျိုးတွေ..... နိုင်ငံတွေနှင့်မဆိုင်..... . သူတို့၏စရိုက်နှင့် သူတို့၏နှလုံးသားများကို ချစ်ခင်လေးစားမြတ်နိုး၍ တန်ဖိုးထားနေခြင်းသာပါ။ . (သုံး) . ဆရာကြီးအက်စ်အက်စ်ဂိုအင်ကာကို မြန်မာတို့ အသိအရှိများပါသည်.... . နာမည်အတိုကောက်က S.S.Goenka။ အပြည့်အစုံခေါ်တော့ Shyam Sunder Goenka.... . ၁၉၃၂ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက်တွင်မွေးပြီး ၂၀၀၂ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်၌ အနိစ္စရောက်ရရှာသည့် ၀ိပဿနာဆရာကြီးဂိုအင်ကာ.... . ဆရာကြီး၏ စာတစ်အုပ်ကို ဆရာပါရဂူဘာသာပြန်ဆိုဖူးပါသည်.... ‘‘ဓမ္မ" ဘ၀တစ်လျှောက် နေသွားနည်း အနုပညာတဲ့...... . ဆရာကြီးဂိုအင်ကာက မေးခွန်းတချို့မေးထားခဲ့ပါသည်။ လူသတ်တာ မကောင်းဘူး... လိမ်တာမကောင်းဘူး... ခိုးတာမကောင်းဘူး.... သူတစ်ပါးသားမယား ပစ်မှားတာမကောင်းဘူး... အဂတိတရားလိုက်စားတာ မကောင်းဘူး.... လောဘကြီးတာ မကောင်းဘူး.... ဒေါသကြီးတာ မကောင်းဘူး.... မောဟကြီးတာ မကောင်းဘူး ... စသည် စသည်များ .............. . ဆရာကြီးဂိုအင်ကာက ဘယ်သူ့အတွက်မကောင်းတာလဲတဲ့။ . . ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက် မကောင်းတာလားတဲ့.. . ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအတွက် မကောင်းတာလားတဲ့... .... . ဟိန္ဒူအတွက်ကရောတဲ့ ..... . အစ္စလာမ်တွေအတွက်ကရောတဲ့.... . ဂျာမန်တွေက ကျူးလွန်ရင်ကောင်းသလားတဲ့.... . . ရုရှတွေက ကျူးလွန်ရင် ကိစ္စမရှိဘူးလား.... .. . အမေရိကန်တွေက ကျူးလွန်ခွင့်ရှိသလား....... . ဘာမှမဟုတ်လောက်ဘူးလို့ထင်ရသော်လည်း ချောက်ချားစရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ.... . ကောင်းမှု၊ မကောင်းမှုဆိုတာ လူမျိုးနဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ကိုးကွယ်ရာဘာသာနဲ့ အသားအရောင်နဲ့ သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ အရာမျိုးမှ မဟုတ်တာလား..... . လုပ်ရပ်နဲ့သာ သတ်မှတ်ကြရတာမျိုးပါ....... . (လေး) . ဒုစရိုက်မှုတစ်ခုကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်က ကျူးလွန်ခဲ့သော် ထိုကျူးလွန်သူ၌ အပြစ်ရှိပါသည်။ . . ထို့အတူ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူ မည်သူမဆို ကျူးလွန်လျှင် ကျူးလွန်သူ၌ အပြစ်ရှိပါသည်... . မကျူးလွန်သူတို့နှင့် ဘာမှမဆိုင်. ထိုင်းလူမျိုးတစ်ယောက်က ကျူးလွန်ခဲ့လျှင်လည်း ထိုကျူးလွန်သူ ထိုင်းလူမျိုး၌ အပြစ်ရှိပါသည်.... . ကျန်ထိုင်းလူမျိုးများနှင့် ဘာမှမဆိုင်...... .
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအပါအ၀င် ကမ္ဘာပေါ်၌ မည်သို့သော ပြစ်မှုကိုမှ မကျူးလွန်သည့် လူသားတို့အပေါ် မည်သည့်ဘာသာဝင်ပဲဟု၊ မည်သည့်လူမျိုးပဲဟု၊ မည်သည့် နိုင်ငံသားပဲဟု တံဆိပ်ကပ်ကာ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ် ညှဉ်းပန်းနေကြသည်များမှာ လူယဉ်ကျေးတို့ကမ္ဘာမှ ဟုတ်ပါလေစဟု မေးရတော့မည့် အနေအထားဖြစ်ပါသည်..... . အမုန်းတို့ အချစ်တို့ဆိုသည်မှာ ကိုးကွယ်ရာတွေ၊ လူမျိုးတွေ၊ နိုင်ငံတွေနှင့်မဆိုင်ပါ.... . လုပ်ရပ်နှင့်သာ ဆိုင်ပါသည်....... . မျိုးမတူသည့်သတ္တ၀ါကို ရန်ရှာလိုသည်မှာ တိရစ္ဆာန်တို့၏ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ဖြစ်ပါသည်.... . ဆရာကြီးဦးအောင်သင်း၏ ထေ့လုံး၊ ငေါ့လုံးကလေး ပြန်ကောက်ပါရစေ..... . မစားဘဲနဲ့ မင်းတို့က လူအချင်းချင်း သတ်နေကြတယ်.... . ဒါ့ကြောင့် ..... . မင်းတို့ကပိုရိုင်းတယ်တဲ့....... . အသားစားလူရိုင်းတို့၏ ကောက်ချက်စကား....။ . ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ ♥ ♡ မောင်သာချို